अमेरिकी पिटबुल टेरियरको विशेषता खोज्नुहोस् कुकुरहरु को विश्व
यद्यपि छोटकरीमा हामी यो जातलाई पिटबुल भनेर चिन्छौं, तर सत्य यो हो कि सबभन्दा सही हुन्छ उनीलाई अमेरिकी पिटबुल टेरियर भन। त्यहाँ अन्य समान नस्लहरू छन् जस्तै अमेरिकन स्टाफोर्डशायर टेरियर वा अमेरिकन बुली जससँग तिनीहरू अलमल्लमा पर्न सक्छन्। तर ती सबैको आ-आफ्नै विशेषताहरू छन्। पिटबुल टेरियर आज एक प्रख्यात प्रजाति हो र पीपीपी कुकुरहरूको कोटीमा पर्छ।
यस जातको केही छ साथी कुकुर हुन उत्कृष्ट गुणहरू, बेकारमा तिनीहरू बेबीसिटरको रूपमा प्रयोग गरिएको थिएन। यद्यपि यस नस्लको खराब तस्विर दिइएको छ र कम सामान्य छ, यिनीहरू अझै छन् जो यी कुकुरहरुलाई विश्वास गर्छन्। तथापि, यो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू साँच्चिकै आज्ञाकारी, विश्वासी र मायालु छन्। हामी प्रसिद्ध पिटबुलको सबै विवरणहरू जान्ने छौं।
1 पीपीपी कुकुरहरू
2 प्रजनन इतिहास
3 पिटबुल टेरियरको शारीरिक विशेषताहरू
6 पिटबुल टेरियर केयर
7 पिटबुल टेरियर किन छ?
यो अद्भुत जातको बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्नु अघि, हामीले कुकुरको लागि यसको अर्थ केहि थोरै परिभाषित गर्नुपर्दछ एक सम्भावित खतरनाक कुकुर मानिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू खराब वा खतरनाक कुकुरहरू हुन्, बरु उनीहरूका सन्तानहरू हुन् कि उनीहरूको शारीरिक विशेषताहरूको कारण तिनीहरू र उनीहरूका मालिकहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ समस्याहरूबाट बच्न। यी कुकुरहरूको विशिष्ट बीमा हुनुपर्दछ र मालिकहरूले साइकोटेक्निकल टेस्ट पास गर्नुपर्दछ तिनीहरूलाई। थप रूपमा, तिनीहरू सँधै पट्टा र थूलीमा हिंड्नुपर्दछ। यसले जातमाथि अधिक नियन्त्रण सुनिश्चित गर्दछ कि यदि तिनीहरू राम्रो शिक्षित छैनन् वा व्यवहार समस्या हो भने वास्तविक समस्या बन्न सक्छ। तर हामी तपाईंलाई पहिले नै भन्दछौं कि हरेक राम्रो व्यवहार र सन्तुलित कुकुरको उत्कृष्ट चरित्र छ।
यद्यपि यो कुकुरलाई अमेरिकी पिटबुल भनिन्छ यसको उत्पत्ति १ th औं शताब्दीमा ग्रेट ब्रिटेनमा भएको छ। यो मोलोसियन लडाई कुकुरको स्पष्ट वंशज हो जहाँबाट अन्य धेरै शक्तिशाली र बलियो नस्लीहरू ओगटेका छन्। यो कुकुरलाई बसाईएको अमेरिकामा ल्याइएको थियो, जहाँ यो बसोबास गर्‍यो। यो व्यापक रूपमा लडाई कुकुरको रूपमा प्रयोग भएको थियो, जुन दुर्भाग्यवस आज पनि स्पष्ट रूपमा गरिएको छ। तसर्थ यस कुकुरको खराब प्रतिष्ठा, जे भए पनि एक राम्रो साथी कुकुर हुनको लागि एक ठूलो मुटु र उत्कृष्ट विशेषताहरू छन्।
यो निश्चित रूपमा नराम्रो प्रेसले बनाएको हो धेरै जात जातका संगठनहरूले यसलाई पहिचान गरेन जस्तै, यो एक परिभाषित मानक र आनुवंशिक विशेषताहरु छ कि बावजुद। अरू धेरैले यसलाई ध्यान दिएका छन् र पक्कै पनि यो कुकुर हो जुन झगडाबाट परेको संसारभरि नै लोकप्रिय छ। भाग्यवस आजकल उनी बढि एक राम्रो साथी कुकुरको रूपमा देखा परेको छ।
पिटबुल टेरियरको शारीरिक विशेषताहरू
यो कुकुर यसको ठूलो शारीरिक बलको लागि बाहिर खडा छ र Sttafordshire संग भ्रमित गर्नु हुँदैन, किनकि यो प्रजाति भन्दा अग्लो र अधिक आनुपातिक छ। उसको टाउको फराकिलो र ठूलो अनुपात भएको लागि बाहिर खडा छ, एक inverted त्रिकोण समान। उसको कान मध्यम आकारको छ, केही उठेको छ। तिनीहरूलाई काटना हाल प्रतिबन्धित छ, जुन पहिले सामान्य थियो। तिनीहरूको आँखा हल्का निलो बाहेक लगभग कुनै रंग हुन सक्छ।
यस कुकुर को लागी ध्यान आकर्षित गर्दछ महान मांसपेशीहरु छ। यो आश्चर्यजनक छ कि धेरै व्यायाम नगरी पनि तिनीहरू कुकुरहरू हुन् जसले धेरै मांसपेशीहरू राख्छन्, किनकि यो जेनेटिक हो। यद्यपि तिनीहरू पातलो र पातलो पनि हुन्छन् Staffordshire.
Su कोट छोटो छ र सामान्यतया चमकदार र चिल्लो हुन्छ। यो एक कोट छ जुन धेरै प्रचुर छैन र यो मर्मत गर्न धेरै सजिलो छ। उनीहरूको कपालमा रंगहरू फरक फरक हुन्छन्, किनकि ती सबै स्वीकारिन्छन्। खैरोहरू धेरै लोकप्रिय छन्, र उनीहरू पनि खैरो दागका साथ सेतो रंगका साथ। तर पक्कै पनि संयोजन धेरै फरक हुन सक्छ।
यस खण्डमा हामी गर्नेछौं यस कुकुरको वरिपरि सिर्जना गरिएका मिथ्याहरू मिसाउनुहोस्। मिडियाले एक प्रजातिको छवि सिर्जना गर्‍यो जुन अस्थिर र आक्रामक पनि छ, जब वास्तविकता के हो भने खराब शिक्षा र मालिकहरू जसले कुकुरहरूलाई हिंसाले हुर्काउँछन् त्यहाँ त्यस्ता असन्तुलित व्यवहारहरूको उत्पत्ति छ। नस्लमा नै केहि उत्कृष्ट गुणहरू छन्।
पिटबुल टेरियर एक हो धेरै आज्ञाकारी कुकुर जो बचपन देखि आदेश मा उपस्थित हुनेछ यसको मालिकबाट र सिकाइएको सबै कुरा सिक्ने प्रयास गर्नेछ। हामी हेर्ने छौं कि यो नस्लको साथ शिक्षा र सीमाहरू तय गर्न यो सजिलो छ। उहाँ एक धेरै सक्रिय र चंचल कुकुर हुनुहुन्छ, जसले बलको पछाडि दगुर्दा र उर्जा खेर फाल्दा रमाईलो पार्नेछ, तर कुनै गल्ती गर्नुहुन्न, ऊ लामो समयसम्म खेलकुदका लागि बनेको कुकुर होइन। यो साइबेरियाली हस्की होइन जुन एक घण्टा सम्म चल्न सक्छ। यी कुकुरहरूसँग तीव्र गतिविधिको चुचुराहरू छन् तर हामीले सोचे जस्तो व्यायामको खाँचो पर्दैन।
यो एक छ धेरै मायालु कुकुर र आफ्नो मास्टरमा संलग्न, जसले तपाईंको धेरै कम्पनी बनाउन सक्दछ। यो बच्चाहरूसँग हुनु पनि एक उत्तम कुकुर हो, किनकि यसमा प्राय: धैर्यता र सहानुभूति हुन्छ उनीहरूसँग, एक धेरै राम्रो देखभालकर्ता भएकोले। के सोच्ने विपरित हो, तिनीहरू साँच्चिकै राम्रो कुकुर हो जसले ख्याल राख्छन् र आफ्ना मालिकहरूसँग सम्पर्क राख्छन्।
यो कुकुर वास्तवमै एक शक्तिशाली पशु हो, जब यो पीढिको लागि लडाहरूको लागि प्रयोग भइरहेको थियो जब केवल सब भन्दा शक्तिशाली बाँच्थे। हामी एकको सामना गरिरहेका छौं शायद कुकुर बिरामी हुनेछ कुकुर। जे भए पनि, हामीले उनीहरूका खोपहरूलाई अद्यावधिक राख्नु पर्दछ र उनीहरूको चेक-अपहरू गर्नुपर्दछ, विशेष गरी उनीहरूको उमेरमा जब।
पिटबुल टेरियर केयर
यो कुकुरलाई थोरै हेरचाहको आवश्यकता छ। उसको कोट मात्र केही पटक ब्रश गर्नु पर्छ प्रत्येक हप्ता मृत कपाल हटाउन। तपाईं ग्लोभ वा छोटो कपाल भएको ब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले घरमा धेरै कपालहरू छोड्दैन त्यसैले यो ठूलो फाइदा हो।
यसको गतिविधि को बारे मा, हामीले दिनहुँ हिंड्नको लागि उनीहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। यो कुकुर हो जुन एकदम सक्रिय छ र हिड्न आवश्यक छ, यद्यपि लामो समय सम्म चलाउने जस्ता गहन अभ्यासहरू गरिरहेको छैन। उनीहरू बल खेल्न जस्ता खेलहरू खेल्न मनपराउँछन्, त्यसैले हामी मनोरन्जन गर्न घरमै खेलौना दिन सक्छौं र केही उर्जा प्रयोग गर्न।
पिटबुल टेरियर किन छ?
यद्यपि यस कुकुरको बारेमा नराम्रो वार्ता भएको छ र त्यहाँ त्यस्तो देशहरू छन् जुन त्यहाँ हुन प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, सत्य यो हो कि यो महान गुणहरूको साथ एक जात हो। यो एउटा धेरै सक्रिय र बलियो कुकुर, जो राम्रो व्यवहार गर्नु पर्छ, त्यसैले यो वास्तवमै उपयुक्त छैन जो कुकुर शिक्षा वा सीमा दिन चाहँदैनन्। तर यदि हामी उहाँलाई कसरी राम्रोसँग शिक्षा दिने भनेर जान्दछौं भने हामीसँग एक ठूलो कुकुर, स्नेही, नजिक र धेरै खुसी हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर जात » पिटबुल टेरियर
कातालान शेफर्ड कुकुर